musha nyika dzakabatana NFL Vatambi Myles Garrett Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Wedu Myles Garrett anokuudza chokwadi nezve yake Yehudiki nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki (Lawrence Garrett naAudrey Garrett), Hukama nhoroondo.
Moreso, Hama yemumhanyi (Sean Williams), Hanzvadzi (Brea Garrett), Hupenyu hweMunhu, Mararamiro, Muhoro uye Net Worth.
Yakareba nyaya ipfupi, tinoisa pamberi pako mufananidzo wakazara weHupenyu nhoroondo yaMyles Garrett, anodzivirira nhabvu yekuAmerica yekupedzisira yeCleveland Browns yeNational Soccer League (NFL). Yedu Biography inotanga kubva pakuzvarwa kwake kusvika mukurumbira wake.
Kuti ukwidzire chishuwo chako cheBiography, isu tinopa magalari nzira yezviitiko zvakatenderedza hupenyu hwaMyles Garrett. Chokwadi, iyo mifananidzo yaunoona pazasi inopfupisa yake Yehudiki Nyaya uye Biography chokwadi.
Myles Garrett Biography - Tarisa Hupenyu hwake kubva paucheche hwake kusvika mukurumbira wake.
Ehe, isu tinomuziva semutambi wepamusoro-anodzivirira akambotorwa neTexas A&M. Zvisinei nerumbidzo yake, vashoma chete ndivo vakaverenga kupfupika-kunyorwa kwenyaya yaMyles Garrett yehudiki uye Biography.
Naizvozvo, isu tafunga kukuunzira inonakidza nyaya yaMyles Garrett uye kuparara kwebasa rake reNFL. Pasina kutambisa nguva ngatienderere mberi.
Myles Garrett Childhood Nyaya:
Kutanga, Myles Lorenz Garrett akaberekwa musi we 29th waDecember 1995. Akazvarwa kuna baba vake, Lawrence Garrett naamai, Audrey Garrett, pazuva reChishanu rakatendeka.
Mbiri yedu yeAmerica yakaberekerwa muguta riri mudunhu reUS reTexas, muTarrant County, inozivikanwa seArlington. Zvakare, Myles Garrett akazvarwa ari gotwe pakati pevanin'ina vake vaviri.
Kunyangwe Sean William ari hafu-mukoma, hanzvadzi yake ndiBrea Simone Garret. Myles Garrett nehanzvadzi yake vaibva kumubatanidzwa wababa vavo, Lawrence Garrett naamai, Audrey Garrett, vane mapikicha atinoratidza pazasi.
Tarisai Myles Garrett Vabereki - amai, Audrey Garrett uye baba, Lawrence Garrett.
Myles akakurira mumhuri yemitambo. Mukoma wake, Sean Williams, akave nyanzvi yebasketball mutambi.
Munin'ina waMyles, Brea Garrett, aive shasha yeNCAA inokanda uremu paTexas A&M's track uye timu yemunda.
Zvishoma nezvishoma, Myles aida zvemitambo. Semwana wekupedzisira wepamba, zvakamufumura kumitambo yakasiyana-siyana.
Aienda nevabereki vake kunoona mumwe wevanin'ina vake vachitamba mitambo yavo. Akabva aita zvishoma zvacho.
Myles Garrett semucheche, achidyiswa naamai vake, Audrey.
Myles Garrett akatamba basketball, nhabvu uye mitambo yekutevera. Zvisinei, akazoisa simba rake pabhola.
Paanenge asiri kutamba nhabvu uye kubata mhuri, Myles anonyora nhetembo uye hope dzemasikati nezvemadinosaurs.
Mufananidzo wehudiki wemudiki Myles Garrett nevanin'ina vake.
Nezvemari, Myles Garrett akabva kumhuri yepakati-kati. Chokwadi chekuti vabereki vake vaigona kudzidzisa vana vake zvakanaka chakavaisa muzvikoro zvine mukurumbira zvedzidzo. Kunze kwezvo, zvinotora mari yakawanda kuunza mutambi.
Vataura zvese izvi baba vaMyles vaive muzvinabhizimusi. Zvichakadaro, amai vake, Audrey, aimbove All-American track star paHampton University.
Myles Garrett Mhuri Mavambo:
Achitaura nezve mhuri yake, Myles Garrett Anobata nyika yeAmerica. Iye ndewerudzi rweVatema.
Saizvozvo, Myles Garrett chizvarwa cheArlington, Ohio. Arlington ndiyo imba yevatambi vakawanda vane mukurumbira. The likes of Brandon Workman naBobby Iwuchukwu.
2011 inofungidzira kuvekwa kwemadzinza eguta aive 59% Vachena, 18.8% African American, 6.8% Asia, 0.7% Native American, 0.1% Pacific Islander, 11.3% kubva kune mamwe madzinza, uye 3.3% kubva kune mashoma mamwe madzinza. Latino kana Hispanic yerudzi chero rupi zvarwo vaive 27.4% yehuwandu.
Zita reimba yake, Garrett, ishanduro yechirungu yezita reGerman Gerard. Chirevo chinosanganisira Kushinga kana Kusimba. Asi zvino, kune vekuAmerica, zvinoreva mudziviriri.
Zvakadaro, ruvara rwaMyles Garrett runomupa kure sechizvarwa cheAfrica. Inotevera inomiririra yemifananidzo yemhuri yaMyles Garrett.
Chiratidziro chemifananidzo chekwakabva mhuri yaMyles Garrett.
Myles Garrett Dzidzo:
Garrett akaenda kuMartin High School muArlington, Texas. Paaiva kuchikoro chesekondari, akanga ari munyori wetsamba, nhabvu, uye basketball.
Munhabvu, akawana masaga 19.5 semukuru. Garrett akayerwa semushanu-nyeredzi kutorwa neiyo Rivals.com yekunyorera network.
Mufananidzo wakadimburwa webhuku regore raMyles Garrett kubva kuChikoro.
Akawana pachinhanho chechipiri-akanakisa mutambi mukirasi yake. Myles Garrett akazvipira kutamba nhabvu yekukoreji kuTexas A&M University muna 2013.
Myles aive mukwikwidzi wedunhu mumitambo yekukanda munjanji uye munhandare, aine kukanda kwepamusoro kwe16.01m mukupfura. Kunze kwemamita 50.84 mu discus kukanda.
Kumberi kweGarrett's High School muArlington, Texas.
Myles Garrett Kwekutanga Basa:
Garrett akatanga basa rake renhabvu kuMartin High School pasi peMurairidzi Bob. Basa rake rekutanga rakatanga achiri kukoreji.
Saizvozvo, Myles akarekodha 81 tackles uye 19.5 quarterback masaga munhabvu gore rake repamusoro. Aive zvakare mumakwikwi mubasketball uye track.
Garrett's high school honors inosanganisira Parade All-American, Texas Class 5A Defensive Player yegore, uye MaxPreps All-American. Akazvipira kutambira Texas A&M Aggies muna Gumiguru 2013.
Myles Garrett akazvipira kutamba nhabvu yekukoreji kuTexas A&M University muna 2013.
Myles Garrett Biography - Mugwagwa weMukurumbira:
Mushure mekuita basa reamateur rakabudirira, Myles Garrett akatanga basa rake rehunyanzvi nesarudzo yekutanga ye2017 NFL Draft. Akave wepamusoro dhizaini yekutora kubva kuTexas A&M munhoroondo yeNFL dhizaini.
Akatanga nekuguma kwekudzivirira kubva kumusasa wekudzidzira pasi pemudzidzisi mukuru Hue Jackson. Zvakangodaro, paaidzidzira, akatambura kuputika kwegumbo, nekuda kwaaifanira kupotsa kutanga kwemwaka.
Akatamba mutambo wake wekutanga achipesana neNew York Jets. Pamutambo, akadzinga Josh McCown kaviri. Aive aita rekodhi ye287 yakasanganiswa tackles, masaga manomwe, imwe pass yakadzivirirwa, uye imwe fumble kupora mumwaka werookie.
Myles Garrett Biography- Simuka kune mukurumbira:
Muna 2018, akanzi kaputeni anodzivirira. Akatamba mitambo gumi nematanhatu uye akarekodha masaga 16, 13.5 akasanganiswa tackles, 44 tackles yekurasikirwa, 12 QB hits, kupasa katatu kwakadzivirirwa uye katatu kumanikidzirwa fumbles.
Muna 2019, nekuda kwechiitiko chisina kujairika panhandare, NFL yakamisa Myles ndokubhadharisa vatambi vese vane chekuita nechiitiko ichi, kusanganisira Mason Rudolph. Vakadzoreredza kumiswa kwake muna Kukadzi 2020.
Mushure mezvo, akasaina kondirakiti yemakore mashanu nechikwata chake. Vakasarudza Garrett we2020 NFL All-Pro Team, pamwe nevatatu vevaanoshanda navo. Heino chidimbu cheMyles Garrett's Highlights.
Vamwe vatambi vechikwata vanosanganisira Jack Conklin, varindi Joel Bitonio naWyatt Teller. Mumwaka wa2021, Garrett akarekodha masaga 4.5 achipesana neBears rookie quarterback Justin Fields.
MaBrown aizohwina 26–6. Myles akabva atyora rekodhi rekodhi semasaga akawanda mumutambo mumwe chete, waimboitwa naAndra Davis. Kuita kwake kwakamupa AFC Defensive Player yeVhiki.
Ndiani Myles Garrett Dating?:
Zvakanaka, Garrett haana kumbobvira aroora. Haana mukadzi. Kubva paakaputika munzvimbo inotaridzika, Myles haana hukama hwerudo nemunhu.
Anonyanya kuzivikanwa nezvehupenyu hwake hwerudo. Hazvisati zvavhurwa kuti ane musikana here.
Kunyange zvakadaro, anosarudza kufarira kushamwaridzana nenhengo dzemhuri. Nezvakataurwa, Myles akataura pa Instagram yake nezvekuda vamwe.
Akaisa zvinoita kunge nhetembo dzerudo. Ndiani anoziva? Nhetembo yerudo inogona kunge iri yerudo rusingazivikanwe rwehupenyu hwake.
Myles Garrett Hupenyu hweMhuri:
Kutanga, Myles Garrett ndewemhuri yakabatana-yakabatana. Mhuri ine mutoro wakakura kwazvo kuhupenyu hwekukunda hwechero ani zvake.
Nhau yakanakisa ndeye mhuri inogona kuve nekuzvarwa kana nesarudzo. Nekudaro, chero yauinayo, zvinokurudzirwa kuti irambe yakatsetseka.
Imba yake yanga ichitsigira zvakanyanya kubva pabasa rake reNFL. Pasinei naizvozvo, vose vanoda zvemitambo; vanogadzira nguva yemumwe nemumwe. Panguva ino muBiography yedu, ngatitaure nezve nhengo yega yega yekumba kwaGarrett.
Mufananidzo wemhuri unoyevedza waMyles, vabereki vake, uye hanzvadzi yake.
Nezve Myles Garrett Baba - Lawrence Garrett:
Baba vaMyles ndiLawrence Garrett. Iye mugari weAmerica anofarira zvemitambo. Akabatsira mukubudirira kwaMyles Garrett muChildhood.
Myles Garrett akanyura mukuzvivimba kwemwana wake. Lawrence akaenda kuSouth Oak Cliff High School.
Akapedza kudzidza kuUC Riverside. Semuridzi webhizinesi, uye akazvitora kuti ave nechokwadi chekuti mhuri yake haina chainoshaya.
Ukuwo, kubatana kwaLawrence naAudrey kwakabereka vamwe vana vaviri. Saizvozvo, vana vake vese, semudzimai wake, vatambi vakanaka. Asi, Lawrence Garrett akarasikirwa nehupenyu hwake pazera remakore makumi mashanu.
Mufananidzo unofadza wababa vaMyles, Lawrence Garrett aine hanzvadzi yake, Brea.
About Audrey Ann Garrett (naiye Johnson) Amai Myles Garrett:
Amai vaMyles Lorenz ndiAudrey Garrett. Hapana mubvunzo kuti Myles anoda sei amai vake. Ave achinakidzwa nehunhu hwake hwekuzvipira mumakore ake ose ekukura.
Uyezve, Myles anomuona semurairidzi. Audrey muenzaniso wakanaka kwazvo waamai vemhando yepamusoro.
Akazvarirwa muVirginia muna 1965. Saizvozvo, mumwe wevana vana veMurwi Wemauto Lloyd Johnson naPamela Johnson.
Akapedza chikoro chikuru mune zvekukurukurirana. Muchokwadi, Audrey aive aine bhezari kubva kuHampton University.
Mufananidzo wakanaka naamai vake, Audrey.
Audrey aimbove All-American track star achiri kuHampton University. Zvisinei, kuti agadzirise zviri nani, akashanda mudhipatimendi resocial services muArlington, Texas. Ikoko, akashanda somurongi webasa.
Pamusoro pezvose, akanga aine sclerosis uye rheumatoid arthritis. Akatanga kuroorwa naRoland Williams. Saizvozvo, muchato wake naLawrence Garrett ndiyo muchato wake wechipiri.
Sezvineiwo, muchato wake naLawrence wakagara kwenguva pfupi nekuda kwekufa kwake. Pasinei nekurasikirwa, akaramba asingazununguki mukuisa vana vake munzira chaiyo yekubudirira.
Mufananidzo waAmai vaMyles, Audrey nehanzvadzi yake, Brea.
Nezve Myles Garrett Siblings:
Sezvambotaurwa kubva pakutanga kweBiography yedu, Myles ane vana vaviri (2) vakuru. Ane mukoma, Sean Williams, uye hanzvadzi inonzi Brea Garret. Vanun’una vacho vanowirirana chaizvo. Saka, vanotsigirana.
Sean Williams ndiye mukoma waMyles. Akazvarwa panguva yekufambidzana kwaamai vake naRoland Williams. Saizvozvo, Sean aimbove mutambi webasketball kuBoston College. Vakamusarudza nhamba yegumi nenomwe mumutambo wekutanga we17 NBA dhizaini neNew Jersey Nets.
Sean akatamba muNBA kubva 2007 kusvika 2012. Zvakare, akambotamba neGlobal Batang Pier, Boston Celtics neDallas Mavericks.
Zvinosuruvarisa, basa raWilliams rekuvimbisa NBA rakatora nguva pfupi nekuda kwematambudziko akati wandei kunze kwedare kubva mukuramba achingoshandisa mbanje.
Saizvozvo, hanzvadzi yake, Brea Simone, zvakare mutambi wemitambo. Akave mumhanyi achangosvika makore makumi maviri nematatu. Brea aive NCAA Champion anokanda kuField timu uye yeAggies track. Saizvozvo, aive mujaho uye mumhanyi wemumunda kuTexas A&M.
Brea Simone ndiye mhare yekutanga yekukanda uremu munhoroondo yeAggie. Akaita basa rakakosha mukubatsira A&M kutora Myles. Brea aigara akamira nehofisi yenhabvu kuti avape matipi uye matipi ekuti angatore sei Myles kuti avatambire.
Zviso zvinofara zvaMyles Garrett nehanzvadzi yake huru, Brea.
Zvimwe Nezve Myles Garrett Relatives:
Mutambi weAmerican NFL anofanira kunge aine dzimwe hama. Myles Garrett ane vashoma vemhuri vakakura parutivi kubva kuvabereki vake nevanin'ina, sababamukuru, vanamainini, nasekuru nasekuru. Kunyange zvakadaro, hatisati tanzwisisa chinhu pamusoro pavo.
Zvakangodaro, tinonzwa nezvasekuru naambuya vake (Lloyd naPamela Johnson). Sekuru vamai vake vaive Army Veteran. Sekuru naamainini vaMyles ndiChristopher, Maurice naPamela, zvichiteerana.
Nepo Pamela aimbova director uye screenwriter weiyo Steele mibairo, Sekuru vake, Christopher, mushandi weUS Air.
Akadzidza muBusiness Administration kubva kuJohn C. Smith University kuCharlotte, NC. Uyezve, Maurice ane dhigirii muInternational Business kubva kuYunivhesiti yeNorth Carolina, Greensboro.
Pix yekare yaMyles, mhuri yake uye vashoma vehama dzake.
Myles Garrett Hupenyu hweMunhu:
Kana asiri kutamba nhabvu kana kubata mhuri, Myles anoshandisa nguva yake kunyora nhetembo. Garrett anga aine chokwadi munguva yakapfuura pamusoro pekunakidzwa kwake kwekunyora nhetembo.
Akawira murudo nehunyanzvi hwekunyora nhetembo kubva paUdiki. Anotumira akawanda ehunyanzvi hwake pamaakaundi ake enhau.
Mufananidzo weGarret achiramba achibatana nevazhinji vateveri vake; kusaina autographs.
Nekudaro, panguva ye2015 offseason, Garrett akamira kushandisa yake social media account pa Twitter, achitaura zvakawanda zvekusaziva pasocial media. Unofunga kuti akanga akarurama here?
Sezvineiwo, Garrett akazotangazve kushandisa Twitter nguva dzose. Garrett ari kushanda pabhuku redhinaso revana. Nyeredzi yeNFL inoita kuti kurovedza muviri kuve kwakanyanya. Achiri kufarira basketball zvakare. Heino chidimbu chezvakanakisa zvake zvebasketball.
Myles, mukuwedzera, anoda imbwa semhuka dzinovaraidza. Anotofamba nembwa dzake. Zvakadaro, anoda kufamba, kubata hove uye kuteerera mimhanzi yakanaka.
Kana asiri kudzinga vanopikisa quarterbacks, mumiriri uye mubatsiri. Asi guruu rinobatanidza mativi ose akasiyana-siyana aMyles kuzvipira kwake kusina mubvunzo kumhuri yake.
Collage yeMyles kunze kwenhandare yenhabvu.
Myles Garrett Mararamiro:
Nyeredzi yeNFL mutambi anoshamisa. Akazviunganidzira kukunda mumakwikwi. Ari kuunganidza mari zhinji, saAaron Rodgers, Travis Kelce nevamwe vakati wandei. Panguva ino, anogona kuwana chero chinodiwa nemoyo wake.
Zvinofadza kuva neimba yakakura zvekuti unokwanisa kuita zvese zvaunoda. Myles Garrett ane imba hombe. Mamirioni emadhora aanowana gore negore anobatsira nazvo.
Imba yake Hombe inogara mota dzake uye zvimwe zvivakwa zveumbozha. Ona iyo collage yemifananidzo pano yeimwe yemota dzake uye yakanakisa yakavanzika Jet rwendo.
Collage yemifananidzo pano yeimwe yemota dzake uye yakanakisa yakavanzika Jet rwendo. Waiona imbwa yake?
Kubva muna 2021, Myles Garrett akafungidzira kuti mambure ake aikosha madhora gumi nemaviri, sekureva kweCelebrity Net Worth. Muna 12, akasaina chibvumirano chemakore mana, $2017 neCleveland Browns, kusanganisira $4 yekusaina bhonasi, $30,412,255 yakavimbiswa.
Bhonasi yekusaina yakaita kuti Myles ave mumwe wevatambi vanobhadhara zvakanyanya muNFL, aine Patrick Mahomes kutungamirira. Saizvozvo, mutambi anobhadhara zvakanyanya paCleveland Browns kwegore. Muhoro wake webasa kusvika 2019 iUS $24.675 miriyoni.
Sekureva kwekondirakiti, Myles Garrett ari kuwana muhoro wepakati wemadhora makumi maviri nemashanu pagore. Kana kondirakiti yake yapera muna 25 nevabrown, mari yaanowana ichave madhora mazana mana nemakumi mana nenomwe. Yake pakati peVatambi vanobhadhara zvakanyanya pasi rose, maererano Forbes.
Garrett akasaina zvibvumirano zvakasiyana siyana mumakore mashoma apfuura. Chikuru pane ese madhiri awa aive neanotungamira emitambo brand Adidas. Paavhareji, anoita inosvika zviuru mazana mashanu emadhora pagore kubva kune ako ekusimbisa zvibvumirano.
Mufananidzo weMyles neimwe yezvigadzirwa zvake zvekusimbisa.
Myles Garrett Untold Chokwadi:
Kunyange zvazvo Myles akanamata mukoma wake mukuru muhuduku hwake hwose, kudzidza kubva mukukanganisa kwake kwakamutungamirira munzira yake yekuve pakati pevanonyanya kudzivirira linebackers muNFL. Muenzaniso ndiko kudzongonyedzwa kwesora nezvinodhaka, anoshuma kudaro.
Kunyange zvazvo Garret ave akanyatsoenderana nekuisa mubasa kuti amusundidzire pamusoro pebasa rake, tarenda yake yakawanda uye chido chemitambo chinowira kune majini - kunyanya kubva kudivi raamai vake. Chii chimwe? Pazasi pane zvinonakidza chokwadi cheanodzivirira yekupedzisira mutambi.
Chokwadi #1: Kurohwa nefani:
Myles Garrett akawana chibhakera kumeso nefani paakanga akagara mumota make ndokuibata zvakanaka.
Sezviri pachena, mumwe mutsigiri akanga asina kufara nechikwata uye akaita chimwe chinhu chaizvo, chaizvoizvo, mbeveve pavakaona Myles Garrett achityaira motokari yake.
Fani mbeveve yakasimudza nyeredzi pasi pekudzivirira, ikatora mufananidzo wake, ikamurova kumeso. Zvisinei, Mapurisa akawana murume uyu. Mapurisa eCleveland akawana murume wavanotenda kuti akarova Myles Garrett.
Havana kumhan'ara nyaya iyi, asi mapurisa akaziva murume ane makore makumi maviri nemana emuStrongsville kuburikidza nerezinesi rake, mapurisa anoti.
Chokwadi #2: Body Issue Magazine:
Audrey akabvuma kuve ndiye anotyaira achitsigira danho raGarrett rekutora chikamu mu2019 Body Issue yeSports Illustrated.
Garrett akaudza magazini kuti amai vake "vakashanda zino nechipikiri" kuti vamupinze munyaya, uye akabvuma.
Akati, Oo, ndakaisundira. Myles agara achishanda pamuviri wake. Uyezve, anodada nazvo.
Pamusoro pezvo, Audrey akafarira hunyanzvi hweMuviri Nyaya. Akazvitarisa kwemakore akawanda uye akafunga kuti vaizozvitora kana Miles angowana mukana.
Chokwadi #3: Makuva pamberi pemba yake:
Garrett akashongedza yadhi yake yekumberi yeHalloween nematombo emakuva evese quarterbacks pane yake hit list.
Mazita ari pachinyorwa chake anosanganisira Murray, Justin Herbert, uyo akadzingwa kamwe naGarrett svondo rapfuura mukukunda kweCharger 47-42 uye murombo Justin Fields weBears, uyo akavigwa ka4.5 naGarrett uye kapfumbamwe nevaBrown vese.
Garrett akashongedza yadhi yake yepamberi yeHalloween nematombo emakuva eese maQB pane ake hit list.
Chokwadi #4: Chiitiko cheHelmet:
Pazuva rechigumi nemana raNovember 14, Myles Garrett akabvarura ngowani yaMason Rudolph.
Zvichakadaro, akarova QB pamusoro pemupikisi wake. Gare gare, Myles akazivisa Rudolph akamudaidza ne 'N-shoko,' izvo zvaakaramba zvakasimba.
Pakupedzisira, chiitiko chacho chakaita kuti Myles amiswe kwemitambo mitanhatu uye akatora manzwiro paari. Gare gare, akatozivisa kusiya mutambo wakataurwa necleveland.com gore rapfuura.
Chokwadi #5: Humanitarian Works/NFL Waterboys:
MuNFL, vatambi vanochera zvakadzika vhiki nevhiki kunze. Apo shasha yeSuper Bowl kaviri Chris Long akashanyira Tanzania kekutanga, akadzoka aine Chiratidzo chenyota.
Kunyangwe aiziva kuti haaigona kuzviita ega, saka akatanga kufambidzana nevezera rake kuNFL uye kutora vatsigiri vakasimba mukurwira kupedza kushomeka kwemvura, akatanga NFL Waterboys.
Muna 2019, mushure mekusiya basa kubva kuNational Soccer League, Chris Long akasarudza Garrett kuti ashande sekaputeni weNFL Waterboys nekuda kwekuzvipira kwaMyle kwenguva refu kukonzeresa mvura yakachena.
Garrett aive nechiroto chekupa mvura yekunwa yakachena kune vanhu vanoshaya kubva kuchikoro chesekondari. “Ndizvo zvibodzwa zvandaiva nazvo kunze kwenhabvu, uye ndaizozvinyora mujenari rangu,” akadaro Myles.
Myles ave ari Browns Waterboy kubvira paakanyorwa nekutanga kusarudzwa kwese muna 2017. Garrett akagamuchira dambudziko rekutungamirira NFL.
Chirongwa cheWaterboys mumakore gumi matsva uye anozadzisa kuzvipira nevezera rake nevateveri kupa mvura yakachena kuvanhu miriyoni.
Parizvino, nyeredzi yeNFL Myles Garrett akatungamira chizvarwa chitsva chevatambi venhabvu veAmerica. Sezvineiwo, kukurumidza kutenderera kuburikidza neMyles Garrett Biography uye Childhood Nhau, isu tave neruzivo rwese zvaungada kuziva nezvake.
Wake Networth, zera, kureba, uremu, mudzimai, mukoma, vabereki, hanzvadzi, hama uye kusimuka mukurumbira. Tafura iyi inoratidza zvese nezveMyles Garrett. Ndizvo chaizvo, uye zvinopa pfupiso uye zvinokubatsira kuti unzwisise Bio yake.
Zita rizere: Myles Lorenz Garrett
Zita rekudanwa: The Flash
Zuva rekuzvarwa: 29 Zvita 1995
Basa: Nhabvu yeAmerica (defensive end)
NFL Dhizaini: 2017 / Round: 1 / Sarudza: 1
Dzidzo: Martin (Arlington), Texas A&M (2014–2016)
Baba: Lawrence Garrett
Amai: Audrey Garrett
Hanzvadzi konama: Sean William
Hama: Vabereki sekuru (Lloyd Jand Pamela Johnson).
Sekuru (Christopher naMaurice), Tete (Pamela).
Hobbies: Kunyora nhetembo, hove, basketball, maekisesaizi, mimhanzi uye imbwa.
kukwirira:	 6 ft 4 mu (1.93 m)
Muhoro: $ Miriyoni 25
Net Worth: Mamiriyoni mana emadhora (12)
Town Town: Texas, usa
Mukupeta kubva kuMyles Garrett's Biography uye Hupenyu Hwehudiki Nyaya, Tinovimba wakadzidza zvidzidzo zvishoma. Myles Garrett akatora mukana mukuru weKuve mudiki weimba.
Akadzidza kubva pane zvikanganiso zvevakoma vake uye akava nechokwadi chokudzivisa zvinotsausa zvoupenyu. Isu tinoshuvira kushivirira kwako kunyoresa kune mamwe biography chokwadi nepamusoro-notch mhando.